Ahlu Sunna oo ka hor timid guddiga ay DF magacowday ee doorashada Galmudug - Awdinle Online
Ahlu Sunna oo ka hor timid guddiga ay DF magacowday ee doorashada Galmudug
Maamulka Ahlu Sunna ayaa si cad uga hor imaaday Guddiga Farsamada ee Doorashada Galmudug ee dhawaan ay ku dhawaaqday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Dowladda Soomaaliya.
Waraaq kasoo baxday Xafiiska Madaxa Xukuumadda Galmudug Shiikh Maxamed Shaakir ayaa lagu sheegay in magacaabista guddigaan ay baalmarsan tahay Dasuurka Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan qodobada 120 iyo 121, iyo midka Maamulka Galmudug gaar ahaan qodobkiisa 29-aad faraqiisa 4-aad kuwaas oo si cad u sheegayo in Galmudug ay xaq u leedahay ka tashiga aayaheeda iyo dhismaha maamulkeeda.
Sidoo kale Shiikh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in magacaabista guddigaan ay baalmarsan tahay heshiiskii dhex maray Ahlu Sunna iyo Dowladda Soomaaliya 03/07/2019.
Ugu dambeyntii Shiikh Maxamed Shaakir ayaa ka codsaday Dowladda Soomaaliya inaysan sabab u noqon qalalaase Siyaasadeed iyo inay mar kale Galmudug burburto.
Hadalka kasoo baxay Ahlu Sunna ayaa kusoo aadayo xilli qaar ka tirsan Musharixiinta Galmudug ay ka hor imaadeen guddigii ay magacowday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyagoo sheegay inuu baalmarsan yahay Dastuurka Dalka u yaalo.
Previous articleEritrean soccer players who defected say they live in fear
Next articleJubaland President’s Inauguration Party Starts in Kismayo